स्टीव जॉब्सको पुस्तक, उनको जीवनी यो भनिएको हुनु पर्छ | आईफोन समाचार
स्टीव जॉब्सको पुस्तक, उनको जीवनी यो बताउनु पर्छ
को थियो स्टीव जर्नल? तपाईं मध्ये धेरै जसलाई उनको नाम थाहा छ उसले तुरुन्तै एप्पलको मुख्य कार्यकारी अधिकारीको पदमा अक्टुबर २०११ मा उनको मृत्यु नहोउन्जेल सम्वन्धित पार्नुहुनेछ। तपाईहरु मध्ये धेरैले सोच्नुहुन्छ कि उनी एक प्रकारको एन्जिल थिए र उनी उद्धारक पनि थिए। एप्पललाई शीर्षमा लग्यो जब यो दिवालियापनको नजीक थियो। तपाईले जानेका सबै आंशिक रूपमा सत्य छन्। भाग यो पूर्ण रूपमा सत्य हुनको लागि यो आवश्यक छ तराजु सन्तुलित पनि थप्दै गाढा जानकारी भविष्यको कल्पना गर्न जान्नुहुने चरित्रको। वास्तवमा त्यहि नै हो जुन तपाईं "स्टीव जॉब्स बुक" मा पढ्न सक्नुहुन्छ, जुन पुस्तक हामीले कभरमा पढ्यौं, "बत्ती र एक प्रतिभा को छाया"।
तपाईंलाई रोजगारहरू कस्तो देखिन्थ्यो भन्ने कुराको कल्पना दिन, यस पुस्तकमा संकलन गरिएको केहि चीजहरू र त्यो पोइन्ट्स मध्ये यो एक चाखलाग्दो छ, एसजेले गरेको पहिलो कुरा भनेको उसको साथी र सहकर्मी वोज्नियाकलाई घोटाला गर्नु थियो। तपाईं सबैलाई थाहा छ, र यदि मैले तपाईंलाई भनेको छैन भने, रोजगारहरू एप्पलको व्यवसायको प्रमुख टाउको थियो यसको सुरूवातमा, iWoz प्रतिभाशाली हुनुभयो जसले कल्पना र उपकरणहरू सिर्जना गरेर "जादू" गर्नुभयो। जब रोजगार अटारीमा काम गरिरहेको थियो, उनीहरूले उनीहरूलाई एक खेलको लागि सोधे जुन ध्यान आकर्षण गर्ने थियो, उनले वोज्नियाकलाई यसको बारेमा भने, र ध्रुव एकजनाले यसलाई सिर्जना गर्नुभयो। तिनीहरूले रोजगारहरूलाई एक निश्चित रकम तिरे र केवल iWoz लाई दिए, वास्तविक सिर्जनाकर्ता, नजिकको बाँकी १००%।
मैले माथिको बारेमा टिप्पणी गरेको छु कि तपाईलाई यो कसरी हुन सक्छ भन्ने बारे एक धारणा दिनुहोस् धेरै प्राप्त गरेको छ जो एक व्यक्ति जीवनमा। यदि तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई धोका दिन सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्न? कार्यहरूले पिकासोको वाक्यांशलाई समर्थन गर्‍यो «राम्रो कलाकार सिर्जना; महान कलाकार चोरी।, केहि चीज जसले पनि माउस (माउस) को साथ नियन्त्रण गरिएको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रयोग गर्न सक्षम हुन सावधानी राख्नेछ। उनले जेरोक्सलाई उनीहरूले के गरिरहेछन् भनी देखाउन आग्रह गरे र त्यो आफ्नो कम्प्युटरमा लगे। मेरो लागी त्यहाँ मानिसहरु छन् जसले यी कुराहरुको बारेमा यहाँ र अहिले खोजिरहेका छन्।
यो स्पष्ट छ कि स्टीभ जॉब्ससँग सम्बन्धित सबै कुरा खराब थिएन, यो टाढाबाट। उदाहरणहरू मैले एउटा स्केललाई सन्तुलनमा राखेको छु जुन प्रायः एप्लिकेनको पूर्व सीईओको सकारात्मक पक्षमा पर्दछ र झण्डै नकारात्मक पक्षमा तौल गर्दैन। र पक्कै पनि ब्रेन्ट स्लेन्डर र रिक टेट्सेलीले सिर्जना गरेको जीवनीको बारेमा कुरा गर्न। तिनीहरू भन्छन् कि यो «एप्पलको प्रतिभा को निश्चित जीवनी"किनभने यो चरित्रको प्रशंसा गर्न सीमित छैनयो वस्तुनिष्ठ र पनि विवादास्पद हो, केहि अन्य धेरै जीवनीहरू या त राम्रो वा नराम्रो बारेमा लेख्न कि छैन, तर ती दुई बीच सन्तुलन छैन।
दुबै लेखकसँग यस जीवनीमा योगदान दिनका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू छन्। स्लेन्डर २ Jobs वर्षसम्म जॉब्ससँग सम्पर्कमा थिए र एप्पलका पूर्व सीईओको विश्वासपाती थिए, उनलाई के थाहा थियो जानकारी हामीसँग अब उपलब्ध छ। अर्कोतर्फ, टेट्सेली एक महत्वाकांक्षी, विद्रोही र अवसरवादी चरित्रको युवाको बारेमा लेख्ने जिम्मामा छन् जुन वर्षौं बितेको छ।
यदि सबैकुराको व्याख्या गरिएको छ भने तपाईले स्लेन्डर र टेट्लीले हामीलाई भन्नु पर्ने सबै कुरा जान्न चाहानु भएको छ भने, तपाई सक्नुहुन्छ अमेजनमा "द स्टीव जॉब्स बुक" खरीद गर्नुहोस् को लागी € ११.7,59। को मूल्य। यो c १.18,53.€XNUMX को मूल्यको लागि हार्डकभरमा पनि उपलब्ध छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » स्टीव जॉब्सको पुस्तक, उनको जीवनी यो बताउनु पर्छ
यो पहिले नै मूल जीवनीमा भनिएको थियो ...
यो केवल कसरी भनिएको छैन ... महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि भनिन्छ कसरी छ!
सेगाले भेट गर्न मिल्दैन र फुटबल प्रबन्धक मोबाइल २०१ches सुरू गर्दछ
के जवाफहरू Android Wear बाट आईओएसमा आउँदैछ?